တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဘုန်းကြီးပြောသော ပုံပြင် (၁)
ကျမတို့ငယ်ငယ်ထဲက ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါးရှိပါတယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးကို အိမ်မှာ ဆွမ်းပင့်ကျွေးတိုင်း မှတ်သားစရာ စကားလေးတွေ ပြောလေ့ရှိတယ်။ တရားဟောသလို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ငြီးငွေ့ဖွယ်မဟုတ်ဘဲ ပုံပြင်ပြောသလိုပြောတတ်လို့ ကျမတို့ငယ်ငယ်ထဲက နားထောင်ပြီး စိတ်ထဲ စွဲနေအောင်မှတ်မိနေခဲ့တယ်။
အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့ ပုံပြင်ကတော့ ကျမကို ခဏခဏပြောလေ့ရှိတဲ့ ပုံပြင်ပါပဲ။ ကျမက စာရေးဝါသနာပါသူမို့ သူ့ပုံပြင်ကို ရေးစေချင်လို့ ခဏခဏ ပြောတာပါ။ သူဘယ်လောက်ပြောပြော ကျမကလဲ မရေးဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒိုင်ယာရီထဲမှာတော့ တေးမှတ်ထားတယ်။ ကျမ ၈ တန်းနှစ်လောက်ထဲက ပြောခဲ့တာ ခုချိန်ထိပါပဲ။ ရေးပြီးပလား မေးတိုင်း ကျမက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ မရေးရသေးပါဘူးဘုရားလို့ ပဲ ပြန်လျှောက်ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ ကျမရေးပါပြီ။ ဒီပုံပြင်ကို သိတဲ့သူတွေလဲ သိမှာပါ …။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... ဘုန်းကြီးကရေးဆိုလို့ ရေးလိုက်တယ်လို့သာ … မှတ်ယူကြပါတော့။
တခါတုန်းက မြို့ရွာနဲ့ မနီးမဝေး တောတွင်းတနေရာမှာ သစ်ခက်တဲလေးထိုးပြီး တရားအားထုတ်နေတဲ့ ရသေ့ကြီးတပါးရှိသတဲ့။ ဒီသစ်ခက်ကျောင်းသင်္ခမ်းလေးနားကို ခွေးပိန်မလေးတကောင်က လာပြီးတော့ ရသေ့ကြီးဆွမ်းစားပြီး ကျန်တဲ့ ဆွမ်းကျန်ဟင်းကျန်လေးတွေစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ ထမလေစား (ထမင်းလုံးအလေအလွင့်ကိုစားသော)ခွေးမလေးဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဆွမ်းကျန်လေးတွေ လာလာစားနေတာကြာလာတော့ ရသေ့ကြီးဟာ ခွေးမလေးကို သနားတဲ့အပြင် သံယောဇဉ်ဖြစ်လာပြီး … လူအဖြစ်ကို ဖန်ဆင်းပေးလိုက်သတဲ့။ (အဲဒီမှာ ရသေ့ကြီး စမှားတာပဲ)
ထမလေစား ခွေးမလေးဟာ အရှင်လတ်လတ် လူမိန်းကလေးဘ၀ကို ပြောင်းသွားတာပေါ့။ ရသေ့ကြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတော့လဲ ရုပ်ရည်ရူပကာက လှတပတ ရှိပါသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ခွေးမလေး တဖြစ်လဲ မိန်းကလေးဟာ ရသေ့ကြီးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေ လုပ်ပေးရင်း တောထဲမှာ နေလာလိုက်တာ တနေ့တော့ … တောကစားထွက်လာတဲ့ ဘုရင်ကြီးတပါးက တွေ့သွားပါလေရော။
ဒီမိန်းကလေးကိုတွေ့သွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ထုံးစံအတိုင်း နှစ်သက်သဘောကျတော်မူတာပေါ့။ သူတို့နှစ်သက်ပြီဆိုမှဖြင့် ပိုင်ရှင်ရှိမရှိမေးမြန်းပြီး (မေးလို့တော်သေးတာပေါ့) ဖခင်ဖြစ်သူ ရသေ့ကြီးထံမှာ တောင်းရမ်းပါတော့တယ်။
အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင် ဆင်ခြင်ဥာဏ် နည်းပါးတဲ့သူမျိုးကို ဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ ကရုဏာနဲ့ မြှင့်တင်ပေးလို့မှ မရဘူး … အဲလို မြှင့်တင်ပေးရင် ကိုယ်သာ ဒုက္ခတွေ့ရနိုင်တယ် … လို့ ဘုန်းကြီးကပြောရင်း သူ့ပုံပြင်ကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ … ။
Posted by မေဓာဝီ at 6:31 AM
မကြားဖူးဘူးဗျ။ ပုံပြင်က နားထောင်လို့ ကောင်းတယ်။ သင်ခန်းစာကတော့ ယူတတ်ရင် ရသပေါ့နော်။ ကျေးဇူးတင်လိုက်ရအုံးမယ် မမေဓာနဲ့ ဘုန်းဘုန်းကို။
11/30/2006 10:01 AM
ဒါလေးဖတ်ပြီး တွေးစရာလေးတွေ အများကြီးရပါတယ်။ ပုံပြင်လေး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမမေဓာဝီ။
ဟို ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ထဲကလို့ ဂုဏ်ပကာသနတွေက
မြင့်မားပြီး စိတ်ဓာတ်တွေက နိပ်ကျကြတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ....
kaung lite ter.....thank you ah ma gyi
မမေဓာကို လေးစားပြီးရင်း လေးစားဆဲပါ..
ပုံပြင်လဲကောင်းကောင်းကြီးပြောတတ်တာကိုး.. :P ခဏခဏ လာနားထောင်မှပဲ. ဆက်ရန်ရှိသေးလားဗျုိ့
12/01/2006 2:23 AM
ဒီပုံပြင်လေးကနေ အသိတရား တစ်ခုရရှိလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...မမေ။ နောက်ကိုလည်း ပုံပြင်တွေပြောပြပါဦး။ မီးမီးက ပုံပြင်ကြိုက်တယ်။
12/01/2006 2:38 AM
မမေဓာ - ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်။
နားထောင်သူများ - ဟင်ပြီးသွားပြီလား။နောက်တစ်ပုဒ်ပြောပြပါဦးဗျို့။
မမေ ပုံပြင်လေးကောင်းတယ်။ မကြားဖူးဘူး တခါမှ။
12/01/2006 5:41 AM
ပုံပြင်လေးကို ကြိုက်ကြ၊ အားပေးကြတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ နောက်တပုဒ်ရှိသေးတယ် … မအားသေးလို့ နောက်မှ ပြောပြတော့မယ်နော် …။
12/01/2006 7:25 AM
ဒီခွေးမလေးက မိဖုရားဖြစ်၊ ခွေးစိတ်ပျောက်ပြီး လူစိတ်ဝင်သွားတယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ပုံပြင်လေး စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
Hi Mamay, how r u?i found this blog very lately. very nice Go on! Good Luck verything! hope to see you soon!
Your Friend Salon
i'm very happy to see ur comment.
i'm pretty well. how abt u??? let me know where r u now.
hey .. i wroteapost in my blog abt u. did u see it? :P
12/02/2006 7:31 AM
မမမေ ရေ ဒီပုံပြင်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မဖတ်တာရတာ ကြာပြီး မမရ အခုမှပဲလိုက်ဖတ်ရတော့တယ်
12/02/2006 2:49 PM
ကောင်းတယ် မမမေ-ရေ။ မှတ်သားစရာလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရသေ့ကြီးမှာလည်း အပြစ်နဲနဲမကင်းဘူးလားလို့ မြင်တယ်။
Ama, i love story.
if u have time, plz wrote many stories.
4/23/2008 5:11 AM
ဒီပုံပြင် လေး.. ကိုတခါမှမဖတ်ဖူးဘူး.. အရမ်းကောင်းတရ်...ဒီ blogကိုခုမှ.. သိရလား.. လို. နောင်တတောင် ရမိတရ်...
12/06/2009 1:51 PM
ဒီ blog လေးကို.. ခုမှ.. သိတရ်ဗျာ..
ပုံပြင် လေးကသိပ်ကောင်းတရ်... တွေးစရာ.. မှတ်စရာတွေ တပုံကြီး. ရလိုက်တရ်.